यस्तो हुन्छ बुधबार जन्मेको मानिसकाे स्वभाव
यस्तो हुन्छ बुधबार जन्मेको मानिसकाे स्वभाव । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतनमाथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण […]
ज्योतिषशास्त्र अनुसार झुठ बोल्न माहिर हुन्छन् यी राशिहरु ! ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । […]
यी चार राशिहरुमा हुन्छ अद्भुत शक्ति ! ज्योतिषशास्त्र अनुसार मानिसको जीवन राशिमा हुने ग्रह तथा नक्षत्रको प्रभाव अनुसार चल्छ । कुनै पनि व्यक्ति कस्तो होला ? जस्तो देखिन्छ के वास्तवमै त्यो व्यक्ति त्यस्तो होला ? यी सबै सवालको जवाफ पनि हामीलाई ज्योतिषशास्त्रको माध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ । जीवनको गोप्य कुराको खुलासा पनि तपाईको जन्म कुण्डली […]
मानिसको शरीरको कुन अंगमा भएको कोठीले के संकेत गर्छ ? मानिसको शरीरको कुनै न कुनै भागमा कोठी हुने हुन्छ । कोठी धेरै किसिमको हुन्छ । कतिलाई त कौतुहुल्ता पनि होला कुन ठाउँको कोठीले के अर्थ राख्छ ? शरीरका विभन्न अंग र त्यसको लक्षणका आधारमा व्यक्तिको चरित्र जान्न सकिने कुरा चर्चामा आइरहन्छ । हिन्दू धर्ममा आधारित […]
यी ३ राशी भएका श्रीमतीहरुले श्रीमानको जस्तोसुकै दु:खमा पनि दिन्छन् साथ । श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन् किनभने एक अर्काको साथ विना जीवन असफल हुन्छ । जीवनमा यी दईबीचको मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्छ । हामीले धेरै उदाहरणहरु पनि देखेका र सुनेका छौँ […]
श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन् यी चार राशी भएका पुरुषहरुले ! भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जीवनमा यी दुईको वीचमा मेल र माया प्रेम हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ […]
यी ३ राशी हुने बुहारीहरुले बनाउछन् घरलाई स्वर्ग समान ! छोराको पत्नी वा भाइको पत्नीलाई बुहारी भनिन्छ । फरक-फरक राशि अनुसार मानिसमा हुने भाग्य र व्यवहार फरक हुने गर्दछ । विवाहको सम्बन्धमा पनि राशि अनुसारको वैवाहिक सम्बन्ध साथै परिवाको निर्धारण रहने गर्दछ । ज्योतिषशास्त्रका यी तल दिइएका उल्लिखित राशि हुने युवतीहरू धेरै सफल र राम्रा […]
शत्रु भएन भने मानिसले आफुलाई सहि दिशामा मोड्न सक्दैन तर शत्रुले बढी नै दु:ख पिडा दिन थालेमा आफुले त्यस्ता शत्रुलाई बशमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ । आज मानिसले लाख कोसिस गर्दा पनि उसको हात रोकिदिएको हुन्छ त्यस्ता शत्रुलाई बशमा गर्ने तान्त्रीक विधि हरेकमा हुन आवश्यक छ । यस्ता विधिहरू आफैले गर्न सकिने तरिकाहरू कुनै तान्त्रीक सम्बन्धी […]
आइतवार बिक्रम सम्बत् पात्रो मान्नेहरूलाई हप्ताको पहिलो बार हो । यसलाई संस्कृतमा रविवार पनि भनिन्छ । यसलाई भानुवारको नामले पनि चिनिन्छ । मंगलबार बिक्रम सम्बत् वा नेपाली पात्रो अनुसार हप्ताको तेश्रो दिनलाई ज्योतिष शास्त्र अनुसार मंगल ग्रहको नामबाट नामाकरण गरिएको हो। ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई […]
आइतवार बिक्रम सम्बत् पात्रो मान्नेहरूलाई हप्ताको पहिलो बार हो । यसलाई संस्कृतमा रविवार पनि भनिन्छ । यसलाई भानुवारको नामले पनि चिनिन्छ । ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने […]
शनिदेव पुजा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु ! शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । कुण्डलीको दशमभावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै कुण्डलीकै एकादशभावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । शनिदेवलाई न्यायको देवता […]
यस्तो छ शनिबार शनिदेवको पुजा गर्ने बिधि
यस्तो छ शनिबार शनिदेवको पुजा गर्ने बिधि ! शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । कुण्डलीको दशमभावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै कुण्डलीकै एकादशभावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । शनिदेवलाई न्यायको […]
ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतन माथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो । ज्योतिषशास्त्र वेदको आँखाको रूपमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ । ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र […]
शनिबार यी कामहरु गर्नुहोस्, शनिदेव हुन्छन प्रसन्न
शनिबार यी कामहरु गर्नुहोस् शनिदेव हुन्छन प्रसन्न ! शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । कुण्डलीको दशमभावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै कुण्डलीकै एकादशभावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । शनिदेवलाई न्यायको […]
शनिवार यी कामहरु गर्दा जीवनमा हुन्छ अशुभ ? शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । कुण्डलीको दशमभावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै कुण्डलीकै एकादशभावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । शनिदेवलाई न्यायको […]
शनिदेवद्वारा नै हाम्रो सांसारिक जीवनको कार्यक्षेत्र वा कर्मजीवन सञ्चालित भएको मानिन्छ । कुण्डलीको दशमभावलाई कर्म, पिता र राज्यपक्षको प्रतीक मानिन्छ । त्यस्तै कुण्डलीकै एकादशभावलाई आय र राज्यसुखको भाव मानिन्छ । त्यसैले कर्म, सत्ता र आयको प्रतिनिधि ग्रह भएका कारणले जन्मकुण्डलीमा शनिको स्थान महत्त्वपूर्ण छ । शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ अथवा राम्रो काम गर्नेलाई राम्रो र […]
आज शनिबार, शनिदेवलाई खुशी बनाउन यसो गर्नुहोस् ! ज्योतिषशास्त्र भनेको सौर्यमण्डलमा रहेका ताराहरू र ग्रहहरूको आपसी सम्बन्धबाट प्राप्त हुने किरण अथवा तरंगलाई सुक्ष्म गणितीय सूत्रबाट अध्ययन गरेर त्यसको यस पृथ्वीमा विद्यमान जड र चेतनमाथि पर्ने प्रभावको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अद्वितीय विज्ञान हो। शास्त्रमा भनिए अनुसार शनिदेव मानिसको काम र प्राप्तीसँग सम्बन्धित छन्। शनिदेवलाई खुशी बनाउन […]
सोमबार व्रतकथा यस्तो छ ! एकजना असाध्यै धनवान व्यापारी थियो, उसको घरमा धन आदिको कुनै किसिमको कमी हुंदैनथ्यो । तर ऊ संतति सुखको अभावको पीडा भोग्दै थियो । यही नै साहूको चिन्ताको विषय थियो । ऊ पुत्रको कामना गर्दै प्रति सोमवारका दिन शिवजीको व्रत र पूजन गर्ने गर्दथ्यो र सायंकालमा शिव मन्दिरमा गएर शिवजीको श्री […]
सोमवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ? हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन्। हेरौँ, सोमवारमा कुन देवी-देवताको पूजा गरिन्छ । सोमवार हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सोमवारमा शिवजीको पूजा गर्दछन् । ज्योतिषशास्त्र अनुसार सोमवारलाई शिवजीको […]
यस्तो छ सोमबार व्रतविधि
यस्तो छ सोमबार व्रतविधि । हिन्दुधर्ममा हप्ताको हरेक वारलाई देवी-देवताको वार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक अधिकांश हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुईदिन सोहि वार अनुसारको देवताको पूजा गरि व्रत बस्ने गर्दछन् । सोमबार व्रतविधिको वारेमा जानकारी तल प्रस्तुत गरिएको छ । सोमबार व्रतविधि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू सोमबारमा शिवको पूजा गर्दछन् । ज्योतिषशास्त्र […]